July Dream: Gtalk shock
Posted by JulyDream at 12:28 AM
အဲ့ပို့စ်ကို ရေးချင်နေတာ ကိုဂျူလိုင် ဦးသွားတယ်..
နာမည်လေးက ကဗျာဆန်နေတော့ ရှော့ခ် ထိတာပေါ့လေ..
အဲ့လိုကလေးတွေကို ဆုံးမနေရင် အင်တာနက်ကဖေးဖွင့်တဲ့ ဖေဖေမေမေတွေ ၀င်ငွေနည်းသွားမှာပေါ့ကွယ်..
ဘာအခုမှကြောက်ပါပြီလဲ၊မသိတာနဲ့ accept မလုပ်နဲ့ရှင်းတယ်၊အခုဟာကလူပေါင်းစုံဖြစ်နေပြီ။
ကိုဂျူလိုင်ရေ... ဖတ်ပြီး အဆုံးသတ်တော့ ပြုံးရမလို တည်ရမလို ဖြစ်သွားပါတယ်...း) တကယ်လည်း ဖြစ်နေတာတွေကို ရေးသွားတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်...
အိမ်း ဒီမြှားနတ်မောင်ကတော့ ဂျူလိုင့်အကြိုက် သေချာမသိဘဲ လုပ်သကိုး .. ဘလော့ရေးခံရတာတောင် နည်းသေး .. :)
မသနားနိုင်ပါဘူးတော်.. သနားစရာလားလို့ ....... ဒီလူကြီးကို
နောက်ဆို သူများထက်ဦးအောင် .......... yr asl ? where u chat ...... မေးသာမေးလိုက် ..... ဟတ်ဟတ်
မှားပါတယ် ကတွတ်ပီရယ်လို့ပဲ အော်လိုက်ပါတော့...း)
တော်တော်စိတ်ညစ်သွားပါတယ်။ အမှန်က safe side ယူဖို့အတွက်အဲလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမပြော
တော်တော်များများက ဂျီတော့ခ်ကို အဲလိုအလွဲသုံးစား
မောင်ဂျူလိုင် ဘာအခုမှ ကြောက်ပါပြီလည်း :) အယ် ပြောမယ့်သာ ပြောရတာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကျွန်တော်လည်း ကြုံးဖူးပါ့ဗျာ တော်တော်ဆိုးတာပဲ၊ ဆောရီးဗျာ မအားဘူးဗျာ ခင်ဗျား ဘယ်သူလည်း ဘယ်ကလည်း ကိစ္စရှိရင်လည်းပြောဆိုတော့ အယ်လယ်လယ် တင်းသွားသေးတယ်ဗျ။ မောတယ်မောတယ် မောင်ဂျူလိုင်ရယ် ကျုပ်က သူ့အဘလောက်ရှိတယ်ဗျ။
အကိုလည်းတလောတုန်းက ဂျီတော့ခ်မှာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးစကားမပြောဖူးပဲ လာနှုတ်ဆက်ခံရတယ်.
”အသဲလေး နေကောင်းလား မတွေ့တာကြာပြီနော်တဲ့
ဘာတွေလုပ်နေတာလဲတဲ့” လာလာချည်သေး အကိုကလည်း အကို့ပရိုဖိုင်းမှာ ဒေါ်စုပုံနဲ့ထားထားတာကို တဖက်ကသကောင့်သားက
ကောင်မလေးချောချောလို့ထင်နေသလား မသိပါဘူးကွာ...ဖြစ်တတ်ပုံက ဂလို...
အစ တုန်းက တော့ ကိုယ့်ကို Invite လုပ်လာပြီဆို ဘာမှန်း မသိပဲ Yes လုပ် လုပ်နေခဲ့ တာ နောက်တော့ အလုပ်က တော်တော်လေးရှုပ်တာ ကလား..။ ကလေးတွေ အများစု က ကျွန်မကို မိန်းခလေး ငယ်ငယ် အောက်မေ့ပြီး ဆက်သွယ်ကြတာကိုး.......း) .........။ ဒါနဲ့ပဲ Invite လုပ်တဲ့သူတွေ ကို... Interview လုပ်ပြီးမှပဲ လက်ခံတဲ့ အကျင့်လေး ရခဲ့ပြီ..။ မင်း က ဘယ်သူလဲ... သိလို့ Invite လုပ်တာလား.. မသိဘူးဆို ဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့လဲ...............
အဲဒါ အစ်မရဲ့ ပို့စ်တစ်ခုထဲမှ ..ရေးခဲ့ တာ........
အစ်မ gtalk စသုံးစ လေးတုန်း က မြန်မာတိုင်းထဲ..ကာတွန်းတစ်ပုဒ် ပါဖူးတယ်... သူငယ်ချင်းမလေး ၂ ယောက်..အပြန်အလှန်ပြောနေကြတာလေ....တစ်ယောက် က..သူ့မှ အွန်လိုင်း ရီးစား ၅၀၀ လောက် ရှိတယ်တဲ့..အဲဒီအထဲ က..တစ်ယောက် ကတော့..သူ့ အကြိုက် ကို သိလွန်း လို့...သူကို တကယ် ချစ်တော့ မယ်..အပြင်မှာတွေ့ ရအောင် ချိန်းတော့ မယ် ပေါ့...အဲတော့..သူ့ သူငယ်ချင်းမ က ပြန်မေးတယ်..ဘယ် aacount က တစ်ယောက် လဲ ဆိုတော့..သူက တစ်ခု ရွတ်ပြတယ်.....အဲဒါ..သူ့သူငယ်မ ဖြစ်နေတာလေ....း)........
အစ်မ ဆို..အဲဒီတုန်း ကဘယ်သူ့ ကိူ မှ မယုံခဲ့ ဘူး.....
စ တွေ့တွေ့ တာနဲ့...မင်း မိန်းကလေး ဆို တာသေချာ ရဲ့ လား ကွာ...ယောင်္ကျားလေး ဆိုတာရော..သေချာ ရဲ့ ကွာ...နဲ့ လိုက် မေး..မေး..နေတော့.....ခု...ထိ ခင်နေတဲ့ တစ်ယောက် ဆို...အဲဒီ အကြောင်း မကြာ ခဏ ပြန်ပြော ပြီး..ရီနေတတ်တာ....အစ်မ ..တောကျ ပုံ များ.....း)....
ခုဆို...ကြောက်လို့...ကြိုတင် မိတ်ဆက်မလာ တဲ့..ကိုယ် မသိတဲ့ ဘယ် invitation မှ ကို လက်မခံတော့တာ.....း)....
ဟား..ဟား...ဟား........ကျွန်တော့်ကို သနားကြပါ တဲ့လား ။
၊မသိရင် accept မလုပ်နဲ့ ။ အရေးကြီးတယ်ဆိုရင် သူတို့ mail ထပ်ပို့ပြီး ဆက်သွယ်လိမ့်မယ် ။ နားမလည်တဲ့လူတွေကို အားနာမနေနဲ့ ။ အားဘူးးးး...... လို့ပြောပစ်လိုက် ။ ဟိ ။
တစ်ခါတစ်ခါကျပြန်တော့ သူတို့ကပဲ inviteလုပ်သေး...
ပြီးတော့ who r u? do u know me?တဲ့...
ဘာပြန်ဖြေရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး... :)
ဟီးးးးးးးးးး တကယ်ဗျာ မီးလေးလဲခဏခဏပဲကြုံတယ် အဲ့လိုအခါအလုပ်များနေလို့ကတော့ ချက်ချင်းကိုဘလော့လိုက်တာ ဘယ်ငမေးလ်ရလဲလို့မေးလို့forward ကဆိုရင်ခဏပဲပြောပြီးစကားကောင်းပြောမှဆက်ပြောတာ မဟုတ်လို့ကတော့ ဂျောင်းပဲ.... ဒေါသဒီဂရီတွေပဲတတ်တာတော့ တော်သေးတာပေါ့ တော်ကြာ..သွေးတိုးပါတတ်နေရင်ဒွတ်ခနော်..ဟီးးးး
ကျနော်ကတော့ No ပဲဗျိုး အရင်ကတော့ Yes တယ်။ အခုတော့ မရတော့ဘူး No မှကိုဖြစ်တာ။ ဒီကိစ္စကဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်ဗျာ။ Invite မလုပ်ခင် မေးလ်အရင်ပို့ပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်တယ်မလား။ ဒီလိုစနစ်လေးကျင့်သုံးကြပေါ့။
ကျွန်မကတော့မသိပဲ invite ဆိုရင် နိုးပဲ ကြိုမပြောထားရင် လုံးဝလက်မခံဘူး ပြသာနာတွေများလွန်းလို့ ကိုယ်ပဲနောက်ဆုံးစိတ်ရှုပ်ရတယ် ကလေးတွေများတော့ ပြောရတာဆုရိတာ အဆင်မပြေဘူး
ကျွန်တော်တော့ သိမကြုံဖူးဘူးဗျ... ကိုယ်နဲ့မသိရင် လက်မခံနဲ့ပေါ့.. တော်ကြာ မိန်းမလား ဆိုတာပဲ အမေး ခံနေရလိမ့်မယ်နော်.. :P
gtalk ကို ဆင်တောင်မထားဘူး။ gmail ထဲကဟာကတော့ နဂိုကထဲသိပြီးသားတွေဆိုတော့ ပြသနာမရှိ....ဟိ..ဟိ
အော်.. ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ဒေါသဒီဂရီတိုးတယ်မှတ်နေတာ.. ဒါမျိုးလူတွေတော်တော်များသကိုး... ဟား.. ဟား
အားအားယားယား ဖော်ဝက်မေလ်းကနေလိုက် အက်နေတဲ့သူတွေကိုလဲ အံ့ပါ..
မဗေဒါလဲ သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်ဖော်ဝက်လောက်ပဲ အရေးတယူဖတ်တယ်.. ကျန်တာတွေဆို မေးလ်ရှုပ်လို့ စိတ်တိုမိတယ်..
အပေါ်ကကွန်မန့်တွေဖတ်မိတော့လဲ ကိုယ့်အဖြစ်တွေနဲ့ တူတူတွေချည်းပဲ..